Raadraaca Heshiiska Dekadda Bosaso ee DPWORLD (Timeline) - Horseed Media
Xildhibaanada golaha Wakiilada Puntland ayaa maanta oo Arbaca ah 29 Luuliyo 2020 ka hor fasaxa ciidka ka doodaya dib u eegis lagu sameeyo heshiiskii dekadda Bosaso lagu wareejiyey muddo 30 sano ah, haddaba waxaan si taariikheysan u eegeynaa marxaladihii ugu muhimsanaa ee heshiiskan soo maro.
! Heshiiska ay sidoo kale wuxuu dhigay in dhismaha dekada lagu dhamays tiri doonaa mudo 24 bilood gudahood ah oo ka bilaabmaysa maalinta heshiiska la saxiixay.
DPWORLD waxay saxiixa kadib bixisey lacag gaareysa $20 milyan oo dollar oo hormarin ah.
Heshiiskan waxaa uu u baahnaa in Golaha wakiilada Puntland ansixiyaan.
12 Maarso 2018, Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa isku raacey in dalka laga saaro shirkadda DPWORLD ee Berbera iyo Bosaso.
15 Maarso 2018, Aqalka Sare ee jamhuuriyadda ayaa isku raacey in dalka laga saaro DPWORLD
DPWORLD MA DHISI DOONTAA DEKADDA BOSASO?
Heshiiska P&PORTS iyo DPWORLD waxa uu dhigaayey in laba sano ay ku dhisto dekadda ma aysan fulin waxaana uu dhacay sanadkii 2019. Ballanqaadkii Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni kadib safarkiisi u horeeyey ee ahaa in dhismaha dekaddu bilaamayo ka hor dhamaadka sanadka 2019, ma hirgelin waxaana ka soo wareegey sanad kale.
Barlamanada somalia ee waayahan waa kuwo kitaabka mara hadan garab mara.
Ma lagu sheegi karo barlaman
Alaah baa la xisaabtami doona.